टन्सिलको लक्षण कस्तो हुन्छ ?
You are at:Home»स्वास्थ्य»टन्सिलको लक्षण कस्तो हुन्छ ?
काठमाडौं । टन्सिल गलामा हुने एक समस्या हो, जो शारीरमा आयोडिनको कमीले हुन्छ । टन्सिल भएपछि गला सुन्निने र दुख्ने गर्छ । यसले गर्दा खान पिउन गाह्रो हुन्छ । बोल्न पनि सहज हुँदैन । टन्सिललाई वेवास्ता गरियो भने यसले जटिलता निम्त्याउँछ । यद्यपी घरेलु विधीबाट समेत यसको निदान खोज्न सकिन्छ ।
– हर्बल चिया पनि टन्सिलको उपचारको राम्रो उपाय हो । ग्रीन टि, ल्वाङ-सुकुमेल र दालचिनिीको चिया पिउन सकिन्छ ।